रोमान्चक खेलमा १ रनले स्कटल्याण्डलाई पराजित गर्दै आयरल्याण्डले जित्यो त्रिकोणात्मक सिरिज – WicketNepal
रोमान्चक खेलमा १ रनले स्कटल्याण्डलाई पराजित गर्दै आयरल्याण्डले जित्यो त्रिकोणात्मक सिरिज
Birat Jung Rayamajhi, २०७६ आश्विन ३, शुक्रबार २२:५४
रोमान्चक खेलमा स्कटल्याण्डलाई १ रनले पराजित गर्दै आयरल्याण्डले त्रिकोणात्मक टि-२० सिरिज जितेको छ।
आयोजक आयरल्याण्ड सहित स्कटल्याण्ड र नेदरल्याण्ड सहभागी सिरिजको सम्पूर्ण खेल सकिदा आयरल्याण्डले ४ खेलमा २ जित, १ हार र १ नतिजा विहिनअंक सहित १० अंक हाँसिल गर्यो। स्कटल्याण्डले २ खेलमा २ जित र २ हार बेहोर्दै ८ अंक बटुल्न सक्यो। नेदरल्याण्डले ४ खेलमा १ जित, २ हार र एउटा खेल नतिजा विहिन रहंदा ६ अंक बटुल्यो।
डब्लिनमा सम्पन्न रोमान्चक खेलमा आयरल्याण्डले दिएको १८७ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा स्कटल्याण्डले २० ओभर ब्याटिंग गर्दै ६ विकेट गुमाएर १८५ रन बनाउन सक्यो र १ रनको हार बेहोर्न पुग्यो।
अन्तिम बलमा जितको लागी ३ रन आवस्यक हुँदा क्रेग वालेस १ रन पुरा गर्दै दोश्रो रन लिंदै गर्दा रन आउट हुन पुगेपछि खेल आयरल्याण्डले खेल जित्यो।
WHAT A FINISH! Ireland won by 1 run! #BackingGreen ☘️? pic.twitter.com/Y73RwWadJb
लक्ष्य पछ्याउने क्रममा स्कटल्याण्ड ओनर म्याथु क्रसले अविजित ५५ बलमा ६६ रन बनाए पनि जित दिलाउन सकेनन्। उनले ६ चौका र ३ छक्का प्रहार गरे। यस्तै कप्तान रिची बेरिंगटनले सर्वाधिक ७६ रन बनाए जुन क्रममा ४३ बलमा ७ चौका र ५ छक्का प्रहार गरे।
बेरिंगटन र क्रसले तेश्रो विकेटको लागि १२२ रनको विशाल साझेदारी गरे पनि १७ औं ओभरमा बेरिंगटन आउट भएपछि लगातार विकेट गुम्नु स्कटल्याण्डको हारको कारण बन्यो।
बेरिंगटनकोक विकेट जाँदा १५८/३ पुगेको स्कटल्यान्डले त्यसपछि १७ बलमा २८ रन बनाउन सकेन। क्यालुम म्याकलोयड ५ र ओली ह्यारिस खाता नखोली आउट भए।
आयरल्याण्डको बलिंगमा मार्क अडीरले २ तथा डेभिड डेलानी, क्रेग योंग र जर्ज डकरेलले १/१ विकेट लिए।
यस अघि टस हारेर ब्याटिंग गर्ने क्रममा आयरल्याण्डको लागि ओपनर केभिन ओ ब्रायनले सर्वाधिक ६३ रन बनाए। उनले ४५ बलमा ३ चौका र ४ छक्का प्रहार गरे। ग्यारी विल्सनले ३१, गेरेथ डेलानीले २५ तथा एन्ड्रु बालबर्नीले २० रन बनाए।
स्कटल्याण्ड बलर एड्रिएन निल, सफ्यान सरिफ, हम्जा ताहिर र टम सोलले २/२ विकेट लिए।
पहिलो खेल – आयरल्याण्ड Vs नेदरल्याण्ड – नतिजाविहिन ( वर्षा )
पाँचौ खेल – स्कटल्याण्ड Vs नेदरल्याण्ड – स्कटल्याण्ड ६ विकेटले विजयी
छैठौं खेल – आयरल्याण्ड Vs स्कटल्याण्ड – आयरल्याण्ड १ रनले विजयी